Bariga Dhexe: Istiqaaladdii R/Wasaare Al-Xariiri & mustaqbalka Lubnan – Kasmo Newspaper
Bariga Dhexe: Istiqaaladdii R/Wasaare Al-Xariiri & mustaqbalka Lubnan
Updated - November 6, 2017 3:59 pm GMT
London (Kasmo), Sabtidii, 4tii Nofembar 2017, Ra’iisal Wasaarihii Lubnan, Sacad al-Xariiri ayaa iska casilay xilkiisii, isaga oo si toos ah uga caddeeyay Tv-ga Sacuudiga, in uu tuhunsanyahay shirqool lagu khaarajinayo oo Iiraan ka dambayso.
Iiraan ayaa isla maalintiiba, si kulul, uga jawaabtay iyada oo afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Bahram Qassemi, war rasmi ah ku eedeeyay Sacuudi Carabiya iyo Maraykanka in ay ka dambeeyaan, si ay fadqalallo uga abuuraan Gobolka.
Istiqaaladda Al-Xariiri waxay ku soo beegmaysaa xilli aan laga filayn muuqaalka guud ee siyaasadda Lubnan, waxayna galin kartaa dalka qalalaaso siyaasadeed oo cusub.
Lubnan waa dal ku socoda habka Barlamaaniga oo awoodda lagu qaybsaday qaab diimeed, heshiiskii Qaran ee 1943kii ee dhalay Dastuurka, jagooyinka ugu sarreeya Dowladda wuxuu u qoondeeyay 3da kooxood ee muhiimka ah.
Madaxweynuhu wuxuu ka soo jeedaa Kirishtaanka “Maronite”, Ra’iisal Wasaaruhuna Muslimka Sunnada, Guddoomiyaha Barlamaankuna Muslimka Shiicada.
Isbahaysigii Al-Xariiri wuxuu kulminayay dhammaan xisbiyada waaweyn ee dalka oo uu ku jiro Ururka Xisbullah, sidaa darteed istiqaaladda R/Wasaaraha waxay sigaysaa in ay sii kordhiso xiisaddii Sunnada iyo Shiicada.
Lafaguris uu Wargayska Al-Monitor sameeyay wuxuu sababaha ka dambeeya istiqaaladda Xariiri ku macnaynayaa 3 sababood.
1- Midda 1aad waa siyaasad: saadaasha in in uu Al-Xariiri si habsami leh ugu guulaysto doorashada May 2018ka oo aad u hooseysa..
2- Sababta 2aad waa dhaqaale, waxayna si gaar ah ugu saabsantahay xiriirka Sacuudi Carabiya. Ilaa geeridii Boqor Cabdallah 2015kii maalgalintii Al-Xariiri ee Sacuudi Carabiya waxay isu dhimaysay si tartiib ah, intii muddo ahna R/Wasaaruhu wuxuu u soo adkaystay cadaadiska Sacuudiga ee ka hor imaanshaha Xisbullah.
Iscasilaaddiisu waxay ka dhigantahay farriin cad oo muujinaysa adeecista Boqortooyada Sacuudiga; haddii Al-Xariiri ka samata baxo cadaadiska maalqabeennada waaweyn ee Sacuudiga, waxaa kordhi doonta maalgalintiisa Riyadh, wuxuuna badbaadin karaa Shirkaddiisa “Saudi Oger”.
3- Midda 3aad waa siyaasad-dhuleed “Geopolitics” waxayna ku saabsantahay hardanka u dhexeeya Sacuudiga iyo Iiraan, oo jabkii Daacish ka dib isku haysta Ciraaq.
Xaalka waxaa sii cuslaynaya mowqifka quwadaha Caalamiga ah, iyada oo sacuudiga iyo Iiraan ka sokow xitaa Israel ka hadashay, iyada oo istiqaaladda Al-Xariiri ku macnaysay mid Beesha Caalamka ku baraarujinaysa sida Iiraan ugu tahay halis xasilloonida Bariga Dhexe.
Sidaa darteed, Al-Monitor wuxuu mala awaalayaa 3 xaaladood oo midkood ku dhici doona saaxadda siyaasadda Lubnan:
a) Xaaladda oo caadi ahaata, ka dib dhammaadka Xukuumadda Al-Xariiri, taas oo keeni karta xukuumad ku-meelgaar ah iyo muddo kordhin loo sameeyo Barlamaanka.
b) Iska caabbin looga hortago Riyadh iyada oo la magacaabo R/Wasaare lagu muransanyahay oo Al-Xariiri u oggolaada in uu hoggaamiyo mucaaradka Xukuumadda cusub.
c) Midda 3aad oo suuragalka ah waa dhismaha Xukuumad kalaguur ah oo farsamo-yaqaan ah oo uu hoggaaminayo R/Wasaare Sunna ah, dhexdhexaadna ah, oggolaanshana ka haysta Al-Xariiri, kaas oo xilka hayn doona ilaa doorashada cusub ee May 2018.
Taasi waxay Premier-ka cusub ee Lubnan u siin lahayd fursad uu isugu soo sharraxo mucaaradka Xisbullah, iyada oo aan loo samayn wax xiriir ah mowqifkiisa dhinaca Xukuumadda.